राष्ट्रियसभा चुनाव- अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम, कहाँ-कहाँ कसले मार्यो बाजी, हेर्नुस बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
१नेपालले नेदरल्याण्डलाई दियो २०७ रनको विशाल लक्ष्य
३२७ सांसदलाई अध्यक्ष ओलीको प्रश्न- तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने ?
५पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
६माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
७फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
८विशेष कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
९आज सार्वजनिक बिदा
१०कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले बालुवाटारमा मनाए धार्मिक उत्सव, को-को भए सहभागी ?
१२आज सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा, राष्ट्रपतिले दर्शन गर्ने
राष्ट्रियसभा चुनाव- अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम, कहाँ-कहाँ कसले मार्यो बाजी, हेर्नुस बिस्तृतमा
काठमाडौँ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा ३४ सय ६२ मतभार पाएर उनी राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई १ हजार २ सय १८ मतभारले पराजित गरे । कांग्रेस उम्मेदवार रेग्मीले २२ सय ४४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार शंकरप्रसाद बरालले १९८ मतभार पाए । श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको अन्य समूहबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
यस्तै प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेकपाकी इन्दिरा गौतम विजयी भएकी छन् । प्रदेश १ को महिलातर्फको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसकी मीना पुलामी मगरलाई पराजित गर्दै गौतम विजयी भएकी हुन् । उनले ६ हजार ४ सय २२ मतभार पाएर विजयी भएकी हुन् । अन्य नतिजा केहीबेरमै आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यता प्रदेश ५ मा नेकपाका तीनै जना उम्मेदवार विजयी भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाबाट अपाङ्ग सदस्यमा दाङका जगप्रसाद शर्मा, महिला सदस्यमा कपिलवस्तुबाट विमला घिमिरे र अन्यबाट रुपन्देहीका गोपाल भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। दाङका शर्मा गत प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । राष्ट्रिसभाका तीन जना सदस्य पदका लागि नौ जना बीचमा प्रतिपर्धा भएको थियो।
नेकपा र कांग्रेसबाट समान तीनरतीन जना, समाजवादी पार्टीबाट दुई जना र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट एक जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कांग्रेसबाट महिला सदस्यमा दाङबाट गिरिजादेवी न्यौपाने, अल्पसंख्यक सदस्यमा बाँकेबाट मेराज अहम्मद हलवाई र अन्यबाट अर्घाखाँचीबाट बालकृष्ण पाण्डेय उम्मेदवार थिए।
त्यस्तै, समाजवादी पार्टीबाट अल्पसंख्यक सदस्यमा बाँकेबाट सुनिलकुमार सिंघल र अन्यबाट बर्दियाका कृष्णप्रसाद अहिर उम्मेदवार थिए। त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अन्य सदस्यका लागि कपिलवस्तुबाट शिवप्रसाद पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
त्यस्तै यता प्रदेश २ मा महिलातर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी तुलसा दाहाल विजयी भएकी छिन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेकपाको साझा उम्मेदवार रहेकी दाहालले विपक्षी कांग्रेसकी उम्मेदवार नगिना यादवलाई ५६८ मतअन्तरले पराजित गरेकी हुन् ।
त्यस्तै प्रदेश २ कै अन्य समूहबाट राष्ट्रियसभामा मृगेन्द्र सिंह यादव निर्वाचित भएका छन् । राजपाबाट उम्मेदवारी दिएका मृगेन्द्र सिंहले आफ्नै भाइ समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार अनिरुद्ध सिंहलाई पराजित गरेका हुन्।
मृगेन्द्र सिंहले ५ हजार ४ सय र अनिरुद्रले ४ हजार ५ सय १२ मतभार पाए । प्रदेश २ मा राजपा र नेकपा तथा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसअघि नेकपा राजपा गठबन्धनकै महिला उम्मेदवार तुलसा दाहाल र दलित उम्मेदवार राधेश्याम पासवान विजयी भइसकेका छन्। अहिले भने अल्पसंख्यक तर्फको मतगणना जारी रहेको छ।
दाहालले ५२०८ मत प्राप्त गरेकी छिन् भने कांग्रेसकी यादवले ४६४० मतभार प्राप्त गरेकी छिन् । अहिले मतगणना चलिरहेको र अब दलित, अल्पसंख्यक र अन्यको मतगणना हुने निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले जानकारी दिए । राति ९ बजेसम्ममा सबै मतगणना सकिने पनि उनले बताए ।
उता कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा दुवै जना सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नेकपाका मायाप्रसाद शर्मा ३६१८ मतभारका साथ विजयी भए । कांग्रेसका उम्मेदवार डिल्लिराम पाठकले एक हजार २६ मतभार प्राप्त गरे । यस्तै, महिलातर्फ नेकपाकै सुमित्रा विसी ३६८४ मतका साथ विजयी भइन् । कांग्रेसकी गणेशकुमारी बस्नेतले १०२६ ल्याइन् ।